Akụkọ - Na Guangzhou Design Week na Nkume Nkume nke afọ a, anyị tụtụtara n'ihe na-enweta ọtụtụ traction. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anụ ụtọ nkume sintered.
Kedu ihe bụ sintered nkume? Ọ bụ ihe mebere ọnụ kọfị mmadụ mere maka inogide. Ọ dịla afọ ole na ole ugbu a, yabụ ọ bụrụ na ị kpaghị ya na mbụ, ị nwere ike oge adịghị anya. Kedu ụzọ ọ bụla, ị ga-achọ ịmụta ụzọ esi egbutu nkume sintered n'ụzọ ziri ezi. Site na nka onye omenkà gi na ngwa ndi kwesiri ya, i gha enweta ihe kacha mma na ihe a di egwu.
Ihe na-eme nkume sintered dị ka nnukwu ihe bụ ike ya na ntụgharị ya. Nkume a na-eji okwute eji eme ihe maka obibi na nke azụmahịa, ime ụlọ na n'èzí ọbụna arịa ụlọ. Ọ dịkwala ogologo oge na agba na ụdị nhọrọ na-eme nke ọma. Lọ ahịa ndị dị n’ụwa niile na-ere okwute e ji nkume wuo, ma wụnye ya n’elu teepu okwute, ala, mgbidi, na ihe ndị ọzọ e ji wuo ya.
Ihe ngesma Aka nke Nkume Nkume
Njirimara pụrụ iche nke okwute nwere ike ime ka ọ bụrụ otu n'ime mbadamba mgbaghara na-enweghị mgbaghara ịkpụ.
Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ slabs nwere ụkpụrụ edepụtara n'elu. Mpekere ọ bụla ma ọ bụ ezughị okè na ndị a nwere ike imebi ọdịdị ahụ mgbe ọ mechara. Maka ihe ndị ọzọ e ji nkume mee dị ka Neolith nwere atụmatụ ndị na-agbafe na mbadamba, ị ka ga-achọ ịkpụcha ahịhịa zuru oke iji mee ka ngwaahịa gị mechara dị mma.
Ọ bụrụ n ’ị nweta ngbachapụ nke ọma, ogo ọrụ ị rụchara ga-abụ ọkwa kacha elu. Ga-enwe ọrụ niile n'ime sintered ihe ị nwere ike ijikwa. Nweta ya na-ezighi ezi na ị ga-abụ na-eme ihe ọ bụla na-ewe iji zere ihe na-eme n'ọdịnihu ọrụ.
Ọbụlagodi na ịnwere igwe eji egbu mmiri ma ọ bụ igwe ihe eji egbu mmiri, mana ọsọ ọsọ dị nwayọ nwayọ, arụmọrụ dị ala, belata ihe oriri, yabụ ọnụ ahịa nhazi ahụ dị oke elu.
Etu esi egbutu okwute a n’etinyeghi aka na onu ahia
Ga nke ọma na ihe a dị mfe: kwụ ọtọ na ekara ebi.
Super dị ọcha kwụ ọtọ na ekara cutsbụ ihe kwesịrị maka nsonaazụ dị elu nke na-eme ka ị nweta aha gị. Iji nweta ihe ndị ahụ ị ga-achọ ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị. Y’oburu n’inwe igwe na-egbusi okwute akpaka, aka gi adila. Ọ bụrụ na ịnweghị, tụlee itinye ego na otu. Igwe akụrụngwa na-arụ ọrụ igwe na-enweghị atụ. Ọkpụkpụ ọnwụ ahụ ruru 180 mita kwa nkeji, Anyị emeela nnwale sara mbara nke igwe anyị na ihe okwute ndị ahụ. Anyị nwere obi ike na ị ga-enweta otu ọmarịcha nsonaazụ ndị ahịa anyị na-enweta n'ofe China.
Architectural iko, ụgbọ ala iko, ngwá ụlọ iko, nka iko, ji achọ iko, kọbọd iko, oghere iko, spliced ​​mirror